Kaalmada dhanka kharashyada safarada xilliga wareysi shaqo ama barnaamij
Haddii aad tagayso wareysi shaqo oo ka dhacaya meel kale oo aan ahayn halka aad degantahay waxaad heli kartaa kaalmada kharashyada safarka iyo hoyga. Haddii aad ka qayb-qaadato barnaamij ama baaritaan ka dhacaya meel kale xitaa markaa waad heli kartaa kaalmo.
Safarada xilliga wareysi shaqo
Marka aad tageyso wareysi shaqo waxaad heli kartaa kaalmada kharashyada safarka iyo hoyga haddii aad
buuxisay 20 sano oo aad ama khatar ugu jirto inaad noqoto bilaa shaqo
ka diiwaan-gashantahay dhankayaga shaqo raadiye ahaan
ay kugu adagtahay inaad hesho shaqo meel u dhow halka aad degantahay
cadayn karto in shaqo bixiye kuugu yeeray inaad iyaga soo booqato
Waxaa intaasi sii dheer
inaanu samaynay qiimeynta ah in booqashadani ay lagama maarmaan u tahay inaad awoodo helida shaqadan
shaqadan ay ku jirto Platsbanken ama wax u dhigma tani kuna taala gudaha EU, dal EES ah, halkaaas oo aad ka raadisay shaqo. Shaqadan waxay xitaa ku jiri kartaa bogga intarnatka ee Eures
Safarada marka aad ka qayb-qaadanayso barnaamij
Waxaad heli kartaa kharashyada safarka iyo hoyga haddii adigu aad
ka diiwaan-gashantahay mid ka mid ah barnaamijyadayada
hesho baxnaaniska ku jiheysan nolosha shaqada
marayso baaritaan ka hor intaanad bilaabin barnaamij
aad safar noogu imanayso ka dibna naga tagayso ka hor go'aan ku saabsan qorshaha dagnaanshaha
Haddii aad ka qayb-galayso mid ka mid ah barnaamijyadayada oo ku taala meel aanad u safri karin maalin kastaba waxaad heli kartaa kaalmada hoyga iyo kharashyada dheeraadka ah ee hoyga labada meelood ah.
Sidee ayaan u balansanayaa safarkayga?
Ka fikir inaad codsato kaalmada safarada iyo hoyga ka hor intaanad ballansan safarkaaga. La xiriir xafiiska shaqada ama naga soo wac 0771-416 416 haddii aad doonaysid inaad codsato.
Ka dib anaga ayaa go'aaminayna nooca kaalmo ee aad xaqa u leedahay.
Waxaanu kaa caawin karnaa balaminta safarka diyaarad ee gudaha EU ama EES iyo safarada tareenka ee gudaha Iskaandineefiya. Safarada kale adiga ayaa balansanaya.
Ka dib safarkaaga ayaa codsanaysaa magdhabida wixii kale ee kaa baxay. Tani waxaad sida ugu sahlan ka samaynaysaa dhanka adeega elaktarooniga ah ee Ersättning för resa kuna taala Mina sidor.
Sidan ayaad u codsanaysaa magdhabida wixiii kaa baxay
Waxaad codsanaysa magdhabida calaa bil oo ah ka dib. Sidan samee:
Gal Mina sidor adigoo isticmaalaya aqoonsiga elaktarooniga ah
Haddii aanu go'aaminay inaad xaq u leedahay magdhabid waxaa laga arkayaa doorashada Ersättning för resa. Haddii aanad hayn wax magdhabid ah oo aad codsanayso, markaasi ma la arkayo doorashadan.
Dhag ka sii Ersättning för resa oo ku buuxi macluumaadkaaga sida ku cad tilmaamaha dhanka adeega elaktarooniga ah.
Marka aad dhamayso ku saxeex aqoonsigaaga elaktarooniga ah.
Haddii aanad lahayn kombiyuutar ama aqoonsiga elaktarooniga ah
Haddii sabab jirta awgeed aanad fursad u haysan inaad magdhabidan ku codsato qaab dijitaal ah, naga soo wac 0771-416 416.
Dhanka safarada maalinlaha ah waxaad magdhabid ku heli kartaa qaybta kharashyada safarka ee ka badan 600 karoon calaa bil, ama kharashka ka sareeya safarka maalinlaha ee caadiga ka ah halka aad degantahay.
Dhanka safarada xilliga wareysi shaqo waxaad helaysaa magdhabid ah ugu badnaan 2 500 karoon.
Haddii aad u soo safrayso anaga ka dibna naga tageyso xilliga ka hor go'aan ah dhanka qorshaha dagnaanshaha waxaad helaysaa magdhabida kharashkan oo dhan.
Waxaad heli kartaa magdhabida hoyga oo ah 110 karoon calaa maalin, ugu badnaan 2 400 karoon cala bil.
Sidee ayaan u helayaa lacagtayda?
Waa Swedbank kuwa maareeya lacag bixinaha. Haddii aad leedahay xisaab bangi oo ku xiriirsan lambarkaaga shakhsiga ah waxaa lacagtan lagu soo shubayaa halkaas iyadoo aanay ku xirnayn bangiga aad leedahay. Swedbank waxay xitaa kuu soo dirayaan fariin wadata macluumaadka lacag bixintan.
Haddii aanad lahayn wax xisaab bangi ah waxaad taas badelkeeda helaysaa warqada jeega ah oo lagu soo dirayo boosta.
Anigu waxaan helay jeeg – miyaa lacagtan lagu shubi karaa xisaabtayda?
Haddii aad heshay jeega lacag bixinta oo taas badelkeeda aad doonaysid in lacag bixinta dambe lagu soo diro xisaabtaada bangiga waa inaad la xiriirtaa Swedbank. Waxaad koontadaada ka diiwaan gelin kartaa bogga intarnatka ee Swedbank.
Xisaabtaada bangiga ka diiwaan-geli diiwaanka xisaabaha ee Swedbank
Sidee ayaan samaynayaa haddii aan ku safray baabuur gaar ii ah?
Marka aad codsanayso magdhabida kharashyadaada waxaad ku buuxinaysaa tirada ayaamaha safarka. Maalin kasta oo safar ah waxaa ku jira safarki lagu tagay iyo kii guriga lagu soo noqonayay. Adigu uma baahnid inaad soo dirto rasiidhka shidaalka.
Anigu waxaan leeyahay hoos u dhac awooda laxaadka ah oo waxaan u baahanahay qof i sii raaca. Miyaa xitaa qofka i sii raacayaa helayaa magdhabid?
Haddii aad u baahantahay qof ku sii raaca xilliga safaradaada waxaa qofkan ku sii raacayaa heli karaa magdhabida kharashka safarka, habeen dhaxa, kharashka hoyga iyo wixii kaga lumay shaqadooda.